ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: November 2007
စက်တင်ဘာလ အရေးအခင်းအပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/30/2007 05:10:00 PM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/30/2007 01:23:00 AM
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/28/2007 01:33:00 PM
သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရရဲ့ "လိပ်ကလေးလိုနေ" တရားတော်...
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/27/2007 01:03:00 AM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/26/2007 12:40:00 AM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/23/2007 12:50:00 PM
အသက်နဲ့ ဘ၀ကိုရင်းရတဲ့ ကစားပွဲ
ရင်းထားသမျှ …. ဘာမှပြန်မရနိုင်တဲ့ပွဲ
နွှဲသမျှလူ …. နလံမထူနိုင်အောင် ဖြစ်ရတဲ့ပွဲ
ဒီလိုပွဲမှာ … ဇွဲနဲ့ဆက်နွှဲနေတဲ့လူတွေရှိသေးသတဲ့။
တဗိုလ်ကျရင်… နောက်တစ်ဗိုလ် တက်မယ်
ရှိသမျှလဲ… စွန့်ခဲ့ပြီးပြီ…၊ ပိုင်ဆိုင်သမျှလဲ…. လှူခဲ့ပြီးပြီ
ဒါထက်ပို လိုမယ်ဆိုရင် အသက်ကိုလဲ လှူအုံးမတဲ့
အာဏာရူးတဲ့ … စစ်ဘီလူးတွေက
သံဃာကိုလဲသတ်မှာပဲ၊ ကျောင်းသားဆိုလည်း အသေပဲတဲ့။
မကြွင်းကျန်စေရ … အကုန်သတ်ကြတဲ့။
ပြည်သူတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလို့ ဘုရားတနေကြရပြီ။
မဟုတ်ရင်မခံ … တို့တွန်းလှန်ကြစို့
ကဲ….. လိုက်မှာလားမိတ်ဆွေ…. စွန့်ရဲရင်ထွက်ခဲ့ပါ။
Email ကနေတဆင့်ရရှိတဲ့ မမေမင်းဆက်ရဲ့ ကဗျာ။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/22/2007 12:32:00 PM
ကိုမင်းသစ်တည် အီးမေးလ်ထဲက ကဗျာတစ်ပုဒ်...
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/22/2007 12:30:00 PM
မမေမင်းဆက်ရဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။
အမေ မငိုပါဘူးသားရယ်…. ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/22/2007 11:00:00 AM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/21/2007 08:32:00 PM
သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော "လူမိုက်တို့ သွားရာလမ်း" တရားတော်...
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/20/2007 08:40:00 PM
ဆရာတော် အရှင်ဦးကောဝိဒ ဟောကြားတော်မူသော "အဆိုးဆုံးရောဂါ ကုစားပါ" ဆိုတဲ့ တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။
1 comments ရေးပြီးချိန်: 11/20/2007 08:35:00 PM
သီတဂူ ဆရာတော် ရှင်ဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော "ဧကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ ဘ၀ နိဂုံး" တရားတော်ပါ။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/20/2007 08:18:00 PM
ဘာလိုလိုနဲ့ အသက်လည်း ၂၆ နှစ်ရှိပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ Birthday Wish လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်နေ့မှပဲ စာဆက်ရေးတော့မယ်။ ခုလောလောဆယ် ပျင်းလို့။
မှတ်ချက်9 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/13/2007 10:58:00 PM
မှတ်ချက်3 ခု ရေးပြီးချိန်: 11/03/2007 10:20:00 PM